Ingobo yomlando yezihloko zeGraeme Swann - adore Cricket
Okuthunyelwe okumakiwe: Graeme Swann
0 A Umdlalo Izinzwa?
Kuthunyelwe 14th November 2017 by Jon Scaife & wafaka ngaphansi Uncategorised.
Kuyinto sikhathi futhi - ebusuku kukhona eside, emoyeni kubanda, kodwa ngokushesha umsakazo ngeke nomlilo zibe nokuphila futhi alethe imisindo ehlobo Australian ezindlebeni zethu okuthile okungaziwayo. Ingabe England bevela ngomcako sangaphambilini kokuwina (njengoba kwakunjalo 2010-11, noma ngeke Australia ugcwalise 3rd ukugqiba e 4 uchungechunge. Ngokwami ​​am ukubheja ke ngeke draw!
... Funda Article Okugcwele
Tags: Ashes, Australia, England, Graeme Swann, Jonathan Trott, Kevin Pietersen, ukuphathwa
0 India thatha isinyathelo ku test sesithathu
Kushicilelwe 21st July 2014 by Mathewu Woodward & wafaka ngaphansi England, India, Test Cricket. Igcine ukubuyekezwa 3 October, 2016 .
ukuhlolwa okubili in, 1-0 kuya eNdiya. Ihlobo elimpofu laseNgilandi liqhubeke ngokufutheka namuhla ngokumangazayo (sorry, olushaqisayo) ukuwa ngemuva kwasemini namuhla ukunikeza izivakashi isinyathelo esiya phambili kulo lonke uchungechunge. Ngobufakazi obukhona manje kuzoba nzima ukubona i-India edlule iwina uchungechunge.
Tags: Alastair Cook, Gary Ballance, Graeme Swann, Ian Bell, Jimmy Anderson, Joe Umsuka, Kevin Pietersen, Matt Prior, Moeen Ali, Monty Panesar, Stuart Broad
0ENgilandi abadinga Moore ekilasini ehlobo
Kuthunyelwe 24th April 2014 by Mathewu Woodward & wafaka ngaphansi Test Cricket.
Ukuxolisa okokuqala ngenxa yokuntuleka kokushintsha kwakamuva - konke kungenxa yokufika okusha ekhaya okusho ukuthi ngiphaphama (nokulala) amahora alawulwa ngokuphelele yizikhathi zokudla kwamabhodlela kanye noshintsho lwe-nappy - yebo i-bambino encane isifikile. Mnike iminyaka eyi-18 futhi uzobe edlalela i-England.
Nokho; ukwenza ibhizinisi.
Well, ukwenza paraphrase uWilliam Shakespeare ngandlela thile, lokho kwakubusika bokunganeliseki e-England. Ngemuva kokusebenza okuhle kakhulu kuma-Ashes iningi belingacabanga ukuthi ngeke likhulu. Kwenze - ukuhlulwa okuhlazisayo ngokumelene neNetherlands (noma ngabe 'kwakuyi-ruble efile') kufakazelwa i-coup de grace. Ngaphambi nangemva kwalokhu ukuphuma kwesikhashana kwe-shambolic kuye kwaba nokulimala okuphezulu kwabezindaba - abasekho ngumqeqeshi u-Andy Flower, umpetha ophakathi nendawo Jonathan Trott nenkosi yesiphalaphala uGraeme Swann. Futhi-ke vele kukhona lonke uhla oluzungeze uKevin Pietersen. I-Gloveman Matt Fore nayo izoyibuka ngokwethuka ihlombe lakhe njengoba abanye besongela indawo yakhe ohlangothini.… Funda Article Okugcwele
Tags: Andy Flower, England, Graeme Swann, Jonathan Trott, Kevin Pietersen, Matt Prior, Peter Moores, isofthiwe engadingeki
0Australia ukuwapheka ngesitimu kunokuwabilisa on empini yokulwa Proteas
Kuthunyelwe 17th Februwari 2014 by Mathewu Woodward & wafaka ngaphansi Test Cricket.
Lapho iNgilandi ihlangana ne-Australia ochungechungeni lokugcina luka-Ashes, like abaningi, wacabanga ukuthi izivakashi zizogcina i-urn ngesikhathi semidlalo emihlanu edlule. Bekulokhu kuya empini eqine ukwedlula umbukiso wasehlobo kodwa ukunqoba kwakulindelwe.
Isidlali somdlali i-England besinamandla kakhulu, kwakungewona they? Ngaleso sikhathi, ngaphandle kokuma kwe-maestro ye-oda eliphakathi uMichael Clarke, i-XI ehlanganisiwe yezinhlangothi zombili ngabe ibuswa amabhubesi amathathu. Ngaphandle kwe-skipper Clarke obengenza uhlangothi oluhlangene? Mhlawumbe uDavid Warner kaMichael Carberry? URyan Harris kufanele abe nguChris Tremlett noma uTim Bresnan? Impela eyangaphambili, mhlawumbe eyokugcina. Indawo yeShane Watson? Mhlawumbe - kodwa ngubani Wayeyosebenzisa buyisela? On ubuso, Nokho, Izwe laseNgilandi livele ngokugqamile. Funda Article Okugcwele
Tags: AB de Villiers, Alex Noonan, Andy Flower, Australia, Brad Haddin, Centurion, Chris Tremlett, Darren Lehmann, David Warner, England, Graeme Smith, Graeme Swann, Hashim Amla, Jacques Kallis, Jonathan Trott, Kevin Pieterson, Michael Carberry, Michael Clarke, Ryan Harris, Shane Watson, Iningizimu Afrika, SuperSport Park, Tim Bresnan
0Umlotha emlotheni, ENgilandi ukuze Dust
Kushicilelwe 5th Januwari 2014 by Mathewu Woodward & wafaka ngaphansi Test Cricket, isofthiwe engadingeki. Igcine ukubuyekezwa 6 Januwari, 2014 .
Ngoba lokho engizakukwenza ukukusho kungase I awiswe okuvela phezulu ... kodwa ngiyajabula ukuthi lezi zihloko Ashes isezingeni kuphele. Impela nje i-Australia idlale kangcono kakhulu kunesamba sezingxenye zabo kanye ne-England, ngoba ingxenye enkulu, diabolical ngokuphelele.
Ngokuqinisekile njengoba nobusuku obulandelayo usuku ama-Aussies aqoqe umdlalo owucekela phansi ongu-5-0, siphinde siguqele iNgilandi ngesamba esibuhlungu esingafanelwe ukufakwa kumugqa wamazwe omhlaba. Izivakashi manje zidinga ukubuyela emuva, hlanganisa futhi uthathe izingcezu zalolu hambo olunobungozi olungahle lube ngaphansi.… Funda Article Okugcwele
Tags: Alastair Cook, Australia, Ben Stokes, Boyd Rankin, Brad Haddin, Chris Rogers, Chris Tremlett, David Warner, England, Gary Ballance, George Bailey, Graeme Swann, Ian Bell, Jimmy Anderson, Joe Umsuka, Jonathan Trott, Jonny Bairstow, Kevin Pieterson, Matt Prior, Michael Clarke, Mitchell Johnson, Monty Panesar, Nathan Lyon, Peter Siddle, Ryan Harris, Shane Watson, Steve Smith, Stuart Broad, isofthiwe engadingeki, Tim Bresnan
0Graeme Swann umemezela kokuthatha umhlalaphansi ngokushesha
Kuthunyelwe 22d bilan December 2013 by Mathewu Woodward & wafaka ngaphansi Uncategorised.
Phakathi kokulimazeka kohambo lomlotha kuqhamuka enye indawo enamabhomu ashubile - umlingisi ohamba phambili waseNgilandi esizukulwaneni esinikeze ithikithi lakhe.
Yebo kuyiqiniso - uGraeme Swann umemezele umhlalaphansi wakhe osheshayo. Yeka ukulahlekelwa okukhulu. USwann wayengumdlali omuhle kakhulu, ophikisana naye, fighter futhi-nxazonke indoda yeqembu. Wayengase ubambe ngisho ilulwane indlela efanele round.
Njengoba esethathile 255 ama-wike emsebenzini wakhe wokuhlola emthunzini ngaphansi 30 ucezu, irekhodi yakhe ikhona kubo bonke futhi kuzoba nzima kakhulu esikhundleni sakhe. Njengasikhathi sonke ne-England awukho umugqa wama-spinner obophela emnyango ukuze athathe indawo yakhe eceleni. Ngakho-ke lokho kusho ukuthi sibuyele emuva ezinsukwini zokuthi sithathe i-twirler kuphela lapho iphimbo lifanele kunokukhetha kuqala?... Funda Article Okugcwele
Tags: Adam Gilchrist, Graeme Swann, Jimmy Anderson, Jonathan Trott, Justin Langer, Kevin Pieterson, Matt Prior, Mathewu Hayden, Monty Panesar, Shane Warne
2 BROADside eNgilandi mayelana abadlali kokuphumula
Kuthunyelwe 29th Agasti 2013 by Mathewu Woodward & wafaka ngaphansi isofthiwe engadingeki.
Njengoba ngihleli ngilalele i-T20 freak-show (imshaya kabi noma iyiphi insipho esekelwe kumfazi ayibukayo) Kade ngicabanga impikiswano edaleke ngemuva kokuthi i-England iphumule abadlali abahlanu abalulekile ochungechungeni lwe-ODI.
UCaptain Cook, Bell, Graeme Swann, UJimmy Anderson nokaputeni we-T20 uStuart Broad bonke baphakamise izinyawo futhi bavumela i-England entsha ebukeka ibambe ama-Aussies ochungechungeni lwemidlalo emihlanu.
Owayengukaputeni uMichael Vaughan uke washo amazwi akhe futhi uStuart Broad uxoshile emuva. Abezindaba baye bagxumela kwimpikiswano enempilo futhi bayivusa yaba umugqa. Funda Article Okugcwele
1 I-Australia ibambe isandla esiphakeme - kumdlalo wenjoloba ofile
Kushicilelwe 22d bilan Agasti 2013 by Mathewu Woodward & wafaka ngaphansi isofthiwe engadingeki. Igcine ukubuyekezwa 7 Septhemba, 2013 .
Izinsuku ezimbili e-Australia futhi impela zinesandla esiphakeme. Kodwa manje. Umlotha uyanqotshwa futhi uwinwe ngokuqiniseka ngalokho. Lo umdlalo ofana nenjoloba efile futhi ukhumbuza kakhulu uchungechunge lomlotha wasendulo lapho iNgilandi yayivame ukukhipha ukusebenza okuhle kwesigqoko lapho urun yayiphethwe ama-Aussies. Abadlali abahlale behlisa iqembu ngezikhathi ezithile ngokuzumayo bazophatha iminyaka emihlanu noma bathole ikhulu bese kuthi isilinganiso sabo sibheke ochungechungeni olungokomlando. Funda Article Okugcwele
Tags: Alastair Cook, Australia, Chris Woakes, England, Test First, Graeme Swann, Graham Gooch, Ian Bell, Jimmy Anderson, Joe Umsuka, Jonathan Trott, Matt Prior, Shane Watson, Simon Kerrigan, Stuart Broad, isofthiwe engadingeki
1 Aussies Tonked - Manje Phambili
Kushicilelwe 19th Agasti 2013 by Mathewu Woodward & wafaka ngaphansi isofthiwe engadingeki, Uncategorised. Igcine ukubuyekezwa 21 Agasti, 2013 .
Okokuqala ukuxolisa kokungabuyekezi isayithi sekwephuze kakhulu - kanye nomunye umbhali waleli sayithi bengikade ngihamba nge-Europe.
Singabantu emuva ngaleso sikhathi, ngakho ungesabi.
Ngakho, I-England igoqe u-Ashes ngokusebenza kahle kwengquza ngosuku lokugcina ukuze ithumele futhi izithumele ngempela. Kuningi sekubhaliwe mayelana nokusebenza kweNgilandi kanye, ikakhulukazi, Ukusebenza kukaStuart Broad. Kwakukuhle kakhulu, ekupheleni.
Ngakho-ke ngizogxila kokuthile okuhlukile, a-isikhungo off kancane uma kuthanda.
Lapho i-Australia isencithakalo iminyaka embalwa emuva (kubonakala kudala manje!) iphutha elilodwa elenzelwe bona bekungekhona ukopha izingane ezisencane ezizayo ngakho baba nethuba lokuzwa ukuphakama nokukhithika komdlalo wekhilikithi wokuhlola.… Funda Article Okugcwele
Tags: Alastair Cook, Alex AbakwaLee, Gary Ballance, Graeme Swann, Ian Bell, Matt Prior, Yorkshire
0 3-0 eNgilandi ... sifundeni?
Kushicilelwe 14th Agasti 2013 by Jon Scaife & wafaka ngaphansi isofthiwe engadingeki. Igcine ukubuyekezwa 30 Agasti, 2013 .
Ingihlabe kude eholidini ngoba esidlule 2½ amasonto futhi ngingafundile ithuba ukubhala mayelana ikhilikithi. Phakathi naleso sikhathi, kuye kwaba 2 ngaphezulu Ashes ukufana test futhi eNgilandi liye enwetshiwe phambili kwabo ngo 3-0. Njengoba kwase zonke izinhloko ukukhuluma ngezwa ungazange lokho abakushoyo, kanjalo lapha kukhona ezinye imicabango yami, engakhanyisiwe ama-pundits.
Tags: Alastair Cook, Alex AbakwaLee, Australia, Brad Haddin, Chris Rogers, Chris Tremlett, David Warner, England, Fawad Ahmed, Forth Test, Graeme Swann, Ian Bell, Jimmy Anderson, Joe Umsuka, Johnny Bairstow, Jonathan Trott, Kevin Pieterson, Matt Prior, Michael Clarke, kuMozisi Henriques, Nathan Lyon, Peter Siddle, Ryan Harris, Shane Watson, Simon Katich, Steve Smith, Steven Finn, Stuart Broad, isofthiwe engadingeki, Test Third, Usman Khawaja
TMS - A aqinisekisayo eBukhoneni e Brexiting Times (185 ukubukwa)ngoLwesine 23 NgoJuni iBrithani ivote ukuthi ishiye i-European Union. Ukushayela ekhaya ngivela emsebenzini ngishintshe umsakazo futhi ngabingelelwa ngamathoni okwamukela nokugcobisa okuvela kwi-BBC ukumbozwa kwekhilikithi ...
I Bowler sika Holding ... innuendo kusaqhubeka (122 ukubukwa)Cishe zonke fan cricket ayobe ewazwile lesisho edumile, kukhonjwe Brian Johnston, "Holding The Bowler sika, the Batsman sika Willey". Kungakhathaliseki noma cha lokhu ngempela kwakuthiwa bukhoma emoyeni engasekho okubalulekile omkhulu ...
Trent Ibhuloho - Ukuvivinywa phansi Umhlahlandlela (117 ukubukwa)In the yokuqala ochungechungeni oluhlelelwe "khaphi kuze ngezizathu" thina isici Trent Ibhuloho imininingwane kusakhiwo bomhlaba futhi izindawo ezingcono ahlale Ukuze uqale nge, nansi isithombe ...
BROADside eNgilandi mayelana abadlali kokuphumula (93 ukubukwa)Njengoba ngihlezi ngilalele T20 freak-show (it lake beats whatever insipho esekelwe kadoti umka Obheka) Kade ngicabanga impikiswano edaleke ngemuva kokuthi i-England iphumulele abadlali abayisihlanu abaphambili ...
Trent Ibhuloho - Ukuvivinywa phansi Umhlahlandlela (34.1k ukubukwa)In the yokuqala ochungechungeni oluhlelelwe "khaphi kuze ngezizathu" thina isici Trent Ibhuloho imininingwane kusakhiwo bomhlaba futhi izindawo ezingcono ahlale Ukuze uqale nge, nansi isithombe ...
I Bowler sika Holding ... innuendo kusaqhubeka (17.5k ukubukwa)Cishe zonke fan cricket ayobe ewazwile lesisho edumile, kukhonjwe Brian Johnston, "Holding The Bowler sika, the Batsman sika Willey". Kungakhathaliseki noma cha lokhu ngempela kwakuthiwa bukhoma emoyeni engasekho okubalulekile omkhulu ...
Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi? (6.9k ukubukwa)Noma kukhathaza nje ukukhononda ngazibonela ngokwami ​​mayelana ekupheleni play (ngenxa yokuthi bese kumnyama) izolo ebusuku, Kwafika umcabango engqondweni kimi - nge ibhola elibomvu futhi pitch green, kungaba red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi ...
Bonke entsha England, ngaphandle KP (5.2k ukubukwa)In the cricket izindaba enkulu usuku England isimemezele Kevin Pieterson ngeke kusaba amacebo abo, ngempumelelo ukuxoshwa batsman zabo eliphambili. Ekugcineni Lokhu sivukile angibhalele sihloko yami yokuqala ...
Keiley hefferon on Trent Ibhuloho - Ukuvivinywa phansi Umhlahlandlela: “Ayikwazi ulinde 2016”
Imininingwane © 2003-2020, Jon P Scaife & adore Cricket